Home / समाचार / अपाङ्ग युवतीलाई लखेटी लखेटी बलात्कार गरे, परिवार प्रहरीकोमा पुगेर उजुरी गरेपछि प्रहरीले हप्काएर तपाईहरु मिल्नुस त भन्दै मेलापत्र गरेर पठायो ! आखिर किन यस्तो गर्यो प्रहरीले ? ६० बर्षिय आमाले घटनाको बारेमा यसो भनिन् (भिडियोसहित)
अपाङ्ग युवतीलाई लखेटी लखेटी बलात्कार गरे, परिवार प्रहरीकोमा पुगेर उजुरी गरेपछि प्रहरीले हप्काएर तपाईहरु मिल्नुस त भन्दै मेलापत्र गरेर पठायो ! आखिर किन यस्तो गर्यो प्रहरीले ? ६० बर्षिय आमाले घटनाको बारेमा यसो भनिन् (भिडियोसहित) 0
धनकुटामा गएको शुक्रबार एक अपांगता भएकी युवती सामुहिक बलात्कारको शिकार भएकी छिन् । जिल्लाको पाख्रीबास नगरपालिका स्थित एक गाउँकी बोल्न नसक्ने अपांगता भएकी ३० बर्षिया तामाङ्ग थरकी यूवती बलात्कृत भएकी हुन् ।
शुक्रबार राती गाउँकै आफन्तहरु टेके तामाङ्ग र भाईजा तामाङ्गले आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गरेको पीडितकी ६० बर्षिया आमाले बताईन् ।
उनले पाख्रिबास नगरपालिका प्रहरीको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा उजुरी दिएपनि आफूहरुलाई आईतबार जबरजस्ति मिलाए घर पठाएको पिडितकी आमाले बताईन् ।
गरीबी टाढा भगाउन चाहानुहुन्छ, अपनाउनुस गणेशजीको पुजा गर्दा यी उपाय !